Sergio Ramos: “Waxaan jeclaan lahaa inaan la ciyaaro Cristiano oo aan ka horimaanin, waa qatar weyn oo joogto ah” – Gool FM
Sergio Ramos: “Waxaan jeclaan lahaa inaan la ciyaaro Cristiano oo aan ka horimaanin, waa qatar weyn oo joogto ah”
(World Cup) 14 Juunyo 2018. Kabtanka xulka qaranka Spain Sergio Ramos ayaa kasoo muuqday shir jaraa’id maanta oo khamiis ah, wuxuuna kaga hadlay kulanka ay bari kaga daah furan doonaan koobka aduunka 2018 dhigooda Portugal.
Sergio Ramos ayaa diirada saaray ka hadalka waxyaabihii xulka ka dhex dhacay maalmihii la soo dhaafay, xili ay bari ciyaari doonaan kulankooda ugu horeeya ee koobka aduunka 2018.
“Julen Lopetegui wuxuu qeyb ka ahaa shaqadii adkeyd aan soo qabanay, laakiin waa inaan ka gudubnaa wixii dhacay, mana jirto cid ka fiican Fernando Hierro ee buuxin karta bixitaanka Lopetegui”.
“Inaan noqdo kabtanka xulka qaranka Spain Koobka Adduunku waa waxa ugu weyn ee igu dhacay aniga, waa inaan midownaa, waxii dhacay waa inaan kasii noqonaa kuwa ka adag sidii hore”.
“Julen Lopetegui wuxuu qeyb ka noqon doonaa wax walba ee aan ka sameyno koobka aduunka 20018,runtii waxaan ku faraxsanahay inaysan jirin wax dhibaato ah ee ku aadan qolka labiska”.
“Waxaan heysanaa koox xoogan, laakiin anigoo ixtiraamaya qof kasta, waa inaan iska ilaawnaa wixii dhacay, waa inaan eegnaa dhanka isboortiga iyo waxa aan ka sameyn karno gudaha garoonka, marka uu soo idlaado koobka aduunka cid kasta ha sheegto waxa ay doonto”.
Ramos ayaa sidoo kale ka hadlay Cristiano Ronaldo wuxuuna yiri: “Waxaan jeclaan lahaa inaan la ciyaaro oo aan ka horimaanin, waa qatar weyn oo joogto ah, balse qatarta kuma koobna kaliya Cristiano ee kooxda oo dhan, sababtoo ah Portugal waa koox mideysan”.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan shirkan jaraa’id wax walbo ee dhibaato ah kusoo gabagabeyno, sababto ah xaalada ayaa ah inaan u muuqano kuwo aas ku jira kahor kulankeena ugu horeeya ee koobka aduunka”.
Gudoomiyaha Roma oo ka hadlay wararka ku aadan in qaar ka mid ah ciyraatoydiisa ay ka dhaqaaqi doonaan Stadio Olimpico
RASMI: Antoine Griezmann oo go’aamiyay mustaqbalkiisa kooxda Atletico Madrid